16 / 10 / 2019 | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[13 / 11 / 2019] TTSD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ အထွေထွေမန်နေဂျာသို့သွားပါ	06 တူရကီ
[13 / 11 / 2019] AkçarayKuruçeşmeသည်စင်တာကိုရောက်ရှိမည်လား။	41 Kocaeli
[13 / 11 / 2019] Türk Loydu မီးရထားယာဉ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[13 / 11 / 2019] Istanbul Metro အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆု	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[13 / 11 / 2019] Channel Istanbul ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ၊ တင်ဒါဘယ်လိုရှိမလဲ။	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[13 / 11 / 2019] Bursa ရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အခမဲ့နှင့်လျှော့စျေးခရီးသွားကဒ်	16 Bursa
[13 / 11 / 2019] အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ayhan သည် Sivas Ankara အမြန်ရထားရထားကိုလည်ပတ်ခဲ့သည်	06 တူရကီ
[13 / 11 / 2019] Alanya ရှိကျောင်းသားများအတွက်အများပြည်သူဘတ်စ်ကားခများလျှော့စျေး	07 Antalya
[13 / 11 / 2019] ခိုးယူသောစက်ခေါင်းခိုးယူခံရ	33 Mersin
[13 / 11 / 2019] 2019 İZBANလေ့လာရေးခရီးအချိန်၊ İZBANစတင်ဖွင့်လှစ်သောအချိန်ကားအဘယ်နည်း။ ဘယ်နှစ်နာရီပိတ်ပါသလဲ	35 Izmir
နေ့: အောက်တိုဘာလ 16 2019
လျှပ်စစ်မီးနှင့်အချက်ပြစနစ်သို့Bayındır, တုရုနှင့်Ödemişဘူတာလမ်းများဖောက်လုပ်ခြင်း။3/ 2019 GCC သည်ဒေသဆိုင်ရာ ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်စတော့ရှယ်ယာထိန်းချုပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုဌာန (TCDD) ၏အကန့်အသတ်ရှိသောတန်ဖိုး 447258 TL [ပို ... ]
တင်ဒါ၏ရလဒ်အနေဖြင့် 22 မီတာလှေများနှင့်နောက်ပြန်ဖြည့်ခြင်းအကြားဆိပ်ကမ်း TCDD İzmirဆိပ်ကမ်း 23-127 တူရကီနိုင်ငံမီးရထားညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) သည် 2019 / 422911 ၏ကန့်သတ်တန်ဖိုး 46.303.769,24 TL နှင့်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် 62.845.251,00 TL ရှိသည်။ [ပို ... ]
တူရကီနိုင်ငံမီးရထားလမ်း၏ရလဒ်အနေဖြင့် 392 + 742 - 395 + 700 အကြားဆင်ခြေလျှောအစီအစဉ် ဒေသဆိုင်ရာ ၀ ယ်ယူဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) ကန့်သတ်ထားသည့်တန်ဖိုး2/ 2019 GCC 470789 TL နှင့်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် 300.765,01 TL [ပို ... ]
တရုတ်မီးရထား Express ကိုများအတွက်နိုဝင်ဘာလ5အတွက် Marmaray ရောက်ရှိဖို့ရန်စီစဉ်ထားကြသည်ကုန်တင်ရထားကိုကျော် (Titan ဖြစ်ပါတယ်) တရုတ်ကက်စပီယန်ကနိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း "Trans-ကက်စပီယန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း" ပေါ်တွင် အခြေခံ. တူရကီအတွက်ကြိုဆိုအခမ်းအနားကျင်းပပါလိမ့်မည်။ China Railway Express Marmaray Tube Crossing [ပို ... ]
ISO 39001 ယာဉ်အသွားအလာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းဖွင့်ပွဲကို Mersin Metropolitan Municipality Municipal မြို့တော်ဝန် Vahap Seçer၏ပါဝင်မှုဖြင့်ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြူနီစီပယ်သည်အရည်အသွေးလမ်းကြောင်းကိုလျင်မြန်စွာဆက်လက် ဦး တည်စေလိုသည်။ Mersin Metropolitan Municipality, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ / အဖွဲ့အစည်းများ, လမ်း [ပို ... ]
ဒေသတွင်းတွင်ကတ္တရာခင်းလမ်းခင်းခြင်းဖြင့် Mimar Sinan လမ်းရှိ Metropolitan မြူနီစီပယ် Bursa Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Bursa ကိုပိုမိုလက်လှမ်းမီသောမြို့ဖြစ်စေရန်ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ [ပို ... ]
ကုန်သွယ်ရေးသမားနှင့်ငါးဖမ်းသမားနိုင်ငံသားများ၏မျက်နှာများရယ်မောသွားပြီးနောက် Izoc Marina သည် Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်ကကုန်းပေါ်သို့သွားသောငါးဖမ်းလှေများနှင့်စားသောက်ဆိုင်များပျက်စီးသွားခဲ့သည်။ Izmit Marina Handicraft Commercial မှကတ္တရာခင်းခြင်းကြောင့်လက်မှုပညာရှင်များ၏ကျေနပ်အားရမှုကိုဖော်ပြသည် [ပို ... ]
Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနနှင့် TransportationPark A.Ş. သည် Kocaeli အနှံ့ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများရှိ 93 ဘတ်စ်ကားများမှအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ မြို့ပြအစီအစဉ်များကိုရောက်ရှိရန်တောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီခရိုင်တွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံသားများကိုပြုလုပ်သည်။ ပိုင်ဆိုင် [ပို ... ]
Marmara ၏မြူနီစီပယ်၏ပြည်ထောင်စုနှင့် Kocaeli မြို့တော်ဝန် Assoc ။ ဒေါက်တာ 2013 မှစ၍ Tahir Büyükakınသည်မြူနီစီပယ်နှစ်ထောင်ငါးရာနီးပါးနှင့် TransportPark ယာဉ်မောင်းများအားသင်တန်းပို့ချသည့်ဘတ်စ်ကား Simulator သင်တန်းများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ Güvenliကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာလုံခြုံပြီးငြိမ်းချမ်းတယ် [ပို ... ]
ropeway စီမံကိန်းကိုဆန့်ကျင်သူများသည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများစတင်မည့်နေရာတွင်စုရုံးခဲ့ကြသည်။ [ပို ... ]
အရွယ်ရောက်သူများနှင့်ကလေးများအပါအ ၀ င်မသန်မစွမ်းဖြစ်သော ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီး Turhan သည် Ankara YHT ဘူတာတွင်အခမ်းအနားဖြင့်Eskişehirသို့ခရီးသည်များအားခရီးသွားခြင်းအားဖြင့် 'Let's's Listen to Children's Life Life Project' ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဝန်ကြီး Turhan, ရှေ့ဆက်နှုတ်ဆက်၏ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်, တူရကီအားလုံးကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များအနေဖြင့်မသန်စွမ်းလူဦး [ပို ... ]
Fethi Yaşarမှ Demetevler အထိ။ Yenimahalle မြို့တော်ဝန် Fethi Yaşarသည်TÜGİADမှ Ankara ဌာနခွဲ၏ဥက္ကဌနှင့်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ Zafer Yıldırımအားလက်ခံတွေ့ဆုံသည်။ Yenimahalle မြူနီစီပယ်၏လုပ်ငန်းနှင့်ခရိုင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များပေးခြင်း၊ မြို့တော်ဝန် Fethi Yaşar, TÜGİAD [ပို ... ]
တူရကီ, အတိတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဆီးရီးယား၏မြောက်ဘက်ကိုရှင်းလင်းဖို့အကြမ်းဖက်သမားများငြိမ်းချမ်းရေးစစ်ဆင်ရေးနွေစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်နှင့်ဥရောပနိုင်ငံများရှိန်ထမ်းများ၏စီးပွားရေး attrition မှ Country, အောင်မြင်သောသူတို့တူရကီမှလက်နက်တင်ပို့မှုရပ်တန့်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ F-35 ကနေပထမဦးဆုံးအမေရိကန်, တူရကီလေယာဉ်တစ်စင်းအစီအစဉ်ကို [ပို ... ]
Bursa Metropolitan Municipality မှပိုင်ဆိုင်သောBURULAŞကုမ္ပဏီသည် Bursa ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ၀ န်ဆောင်မှုနေရာအမျိုးမျိုးတွင်ကားရပ်နားရန်နေရာများကိုသတ်မှတ်ရန်5ကိုအမြဲတမ်းစုဆောင်းလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ကြေငြာချက်အရကားရပ်နားရန်နေရာတွင်ကားရပ်နားရန်အရာရှိအဖြစ်ခန့်ထားမည့် ၀ န်ထမ်းများသည်BURULAŞသို့သွားမည်ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
ဂျာမန်စီးပွါးရေးသတင်းစာ၏ဂျာမန်ကားကုမ္ပဏီ၏သတင်းအချက်အလက်များအရ Manisa သည်အောက်တိုဘာလအစောပိုင်းတွင်စက်ရုံတစ်ခုဖွင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးအနေဖြင့်တူရကီ၏အရှေ့ဘက်၌အဥဖရတ်ကစီစဉ်ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့စမ်းရေတွင်း, ယင်းဒေသ၏အကျိုးစီးပွားကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းအနောက်တိုင်းပြည်နယ်များ, [ပို ... ]
B ဘီဘီစီဥက္ကEk္ဌ Ekrem amomamoğluသည်ခရိုင်မြှို့နယ်သို့သွားရောက်လည်ပတ်သည်။ မကြာသေးမီက Esenler မြူနီစီပယ်သို့လည်ပတ်ခဲ့သူ Imamoglu, သည်သူ၏6Avcılarမြူနီစီပယ်သို့ယနေ့သွားရောက်ခဲ့သည်။ ခရိုင်၏မြို့တော်ဝန် Turan Hançerliနှင့်နိုင်ငံသားများကအလွန်စိတ် ၀ င်စားစွာကြိုဆိုခဲ့ကြသောamomamoğluကe[ပို ... ]
NSPARK ၌İstanbulkartနှင့် credit card နှင့်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရန် BBB ဥက္ကEk္ဌ Ekrem amomamoğluကကြေငြာခဲ့သော 1 ကိုအောက်တိုဘာလတွင်စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ လွယ်ကူသက်သာစွာငွေပေးချေနိုင်သည့် 16 application သည်တစ်နေ့တာတွင် 40 drivers တစ်ထောင်ကျော်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အသီးအသီး [ပို ... ]
Fahrettin Altay-İzmir Metropolitan မြူနီစီပယ်Narlıdere Metro တွင်လုပ်ငန်းကိုအနှောင့်အယှက်မရှိဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး 2022 တွင်ပြီးစီးမည့်စီမံကိန်း၏တိုးတက်မှုများကိုပြသသည့်နိဒါန်းအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန် Soyer“ ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးစီမံကိန်းမှာရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သွားမယ်။ [ပို ... ]
TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းတံတားနှင့်Bayındır, တုရု, Ödemişဘူတာရုံများလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးခြင်းနှင့်အချက်ပြစနစ်သို့လမ်းများပြန်လည်ဖြည့်ခြင်းအလားတူမီးရထားလမ်းနှင့် Cable Car NewsRayHaber [ပို ... ]
Samsun Metropolitan Municipality အစည်းအဝေးတွင် 44 ကိုတညီတညွတ်တည်းမဲဖြင့်လက်ခံခဲ့ပြီး 42 ကိုအများစုမဲဖြင့်လက်ခံခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ2ရှိ Samsun Metropolitan Municipality 2019 ။ 22 ၏ပေါင်းစပ်။ Sess ဆမ်ဆန် [ပို ... ]
TTSD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ အထွေထွေမန်နေဂျာသို့သွားပါ
Malatya Little ကယာဉ်အသွားအလာသင်ယူသည်
Türk Loydu မီးရထားယာဉ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
Channel Istanbul ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ၊ တင်ဒါဘယ်လိုရှိမလဲ။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ayhan သည် Sivas Ankara အမြန်ရထားရထားကိုလည်ပတ်ခဲ့သည်
2019 İZBANလေ့လာရေးခရီးအချိန်၊ İZBANစတင်ဖွင့်လှစ်သောအချိန်ကားအဘယ်နည်း။ ဘယ်နှစ်နာရီပိတ်ပါသလဲ
RayHaber 13.11.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 13 နို ၀ င်ဘာ 1889 Ottoman စိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်မှု
တူရကီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကိုနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများ
OSB / Törekent Koru Metro လိုင်းအချိန်ဇယားအစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုစီစဉ်သလဲ။
Ankara YHT မတော်တဆဖြစ်ရပ်အားဇန်နဝါရီလ 13 တွင်စတင်မည်
90 ထောင်နှင့်ချီသောပျိုးပင်များ Aksaray ရှိ 'အနာဂတ်ကိုအသက်ရှူပါ' ဟူသောဆောင်ပုဒ်ဖြင့်ကမ္ဘာမြေသို့သယ်ဆောင်လာသည်
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက်: Gate Guard ဝန်ဆောင်မှု၏ဝယ်ယူရေး
နိုဝင်ဘာလ 14 @ 14: 30 - 15: 30
နိုဝင်ဘာလ 15 @ 14: 00 - 15: 00
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (269) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
Hyundai သည်စက်သင်ယူခြင်းကိုအခြေခံသည့် Cruise Control ကိုတီထွင်သည်
Karsan သည်အီတလီသို့တင်ပို့သည့် Continental ဘတ်စ်ကားများကိုအသုံးပြုသည်